အသက်အရွယ် ငယ်ရွယ်စဥ် ကလေးဘဝ ထဲက အစ်ကို ဖြစ်သူ ပြေတီဦးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်ပျက် တစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ ညီမလေး ‌ငွေတီဦး…. – Shwe Naung
အသက်အရွယ် ငယ်ရွယ်စဥ် ကလေးဘဝ ထဲက အစ်ကို ဖြစ်သူ ပြေတီဦးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်ပျက် တစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ ညီမလေး ‌ငွေတီဦး….
ပရိသတ် ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး ကတော့ လက်ရှိ အင်းစိန် ထောင်ထဲမှာ ရောက်ရှိ နေတာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။ေြ ပတီဦးရဲ့ မိဘများဟာ အသက်အရွယ် ကြီးမြင့် နေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် သားအတွက် စိတ်ပူနေကြ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။
မနေ့က အူဝဲလွတ် လာပြီ ဆိုပြီး သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ပေမယ့် ကောလဟာလ တွေသာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း မိသားစု ဝင်များမှ ပြန်ဖြေရှင်းထားတာပါနော်။ပြေတီဦးတွင် အကြီးဆုံး အစ်မ ဆွီတီဦးနဲ့ အငယ်ဆုံး ညီမလေး ငွေတီဦး ဆိုပြီး ရှိပါသေး တယ်နော်။
ငွေတီဦးကတော့ ပြေတီဦးရဲ့ ကလေးဘဝက အမှတ်တရ တစ်ခုကို ပြောပြလာ ပါပြီနော်။သူတို့ ငယ်ငယ် တုန်းက မောင်နှမ နှစ်ယောက် အရမ်းချစ်ခဲ့ ကြတာကိုလည်း ဖတ်ရှု ပေးကြပါဦးနော်။
” ငယ်ငယ်တုန်းက သူဆု ယူရင် ဘေးက လိုက်ပီး သူရတဲ့ ဆုတွေလိုက် သယ်ရတယ်..ကြီးတော့ သူ့ကိုပေးတဲ့ ပန်းတွေ လိုက်သယ်ရပြန်ရော..မေမေ တစ်လ တစ်ခါ ရန်ကုန်သွားရင် မေမေ့ကို လွမ်းရင်း မောင်နှမ နှစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို သတိရမိတယ်..
အဲ့တုန်းက ကိုယ်က သူငယ်တန်းတောင် မရောက်သေးတဲ့ လက်ဖက် မစား ကွမ်းမစား အပျော် တက်တုန်း..ဆရာကြီးရယ် ကိုကြီးမျက်နှာလေး ကြည့်ပါရ စေဆိုပြီး သူ့အတန်းကို သွားချောင်း ခဲ့ရဘူးတယ်..သူကလည်း မေမေ့ကို လွမ်းလို့ မျက်ရည် တွေတွေ ကျတော့.
.ဆရာမက ဘာဖြစ် လို့လဲ မေးတာပေါ့..မေမေ့ကို လွမ်းလို့ ဆိုတော့ မေမေသွားတာ ညီမလေးရော ပါလားဆိုပြီး ဆရာမက သူ့ကို မေးတယ်..ဟင့်အင်း ညီမလေး လည်း မပါဘူး ဆိုတော့.
.ညီမလေးကို တောင် ထားခဲ့တာ မင်းက ငိုနေစရာ လားဆိုပီး ဇာတ်ပိုးကို ရိုက်လိုက် တာနှဖူးနဲ့ ခုံစောင်းနဲ့ ရိုက်မိလို့ ဒဏ်ရာရပါရော..ဒဏ်ရာနဲ့ ပြန်လာတဲ့သားကို မြင်ပြီး ဖေဖေက ဒေါသထွက် ရောပေါ့.
ဒီလောက်တောင် လုပ်ရလားဆိုပီး ဆရာမကို စိတ်တိုတာပါ..ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး..မန်မိုရီ ပြန်တက်လာ တော့ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်း တွေခေ ါင်းထဲပြန် ရောက် လာလို့..” လို့ငွေတီဦးမှ ရေးထားပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ရွှေအိမ်စည်ရဲ. အလန်းစား ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ပုံရိပ်များ….
နှုတ်ခမ်းဆူဆူ လေးနဲ့ အရမ်းကိုလူကြိုက်များ ONLINE မှာ နာမည်ရလာသော ဆယ်လီမလေး သိမ့်သိမ့်သူ ရဲ့ မိမိုက်လွန်း အလန်းစား ပုံရိပ်များ……